आज मंगलबार, मंङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पुजा गर्ने दिन ! २०७६ भाद्र २४ गते मंङ्गलबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा होस ।। #जय_श्री_गणेश_भगवान – सुदूरखबर डटकम
आज मंगलबार, मंङ्गलबारको दिनमा गणेश भगवानको पुजा गर्ने दिन ! २०७६ भाद्र २४ गते मंङ्गलबारको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा होस ।। #जय_श्री_गणेश_भगवान